मिडियाले धनीका अपराध दबाउँछन्, गरिबका अपराध उचाल्छन्ः कार्ल मार्क्स - Everest Dainik - News from Nepal
२. आफ्नो जिन्दगीको मालिक आफैँ हुनुपर्छ– के तपाई हप्ताको सात दिन काम गर्नुहुन्छ ? कामका बेला खाजा–खाना खाने समय लिनुहुन्छ ? एउटा निश्चित उमेरपछि तपाई सेवा निवृत्त हुन र निवृत्तिभरण पाउन चाहनुहुन्छ ? यदि तपाईको जवाफ सकारात्मक छ भने तपाई मार्क्सलाई धन्यवाद दिन सक्नुहुन्छ।
याे पनि पढ्नुस कार्ल मार्क्स, सोल्ड आउट !
ट्याग्स: अपराध, कार्ल मार्क्स, गरीब, धनी, मिडिया